ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု|Engineer|Field Work – JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု|Engineer|Field Work
traffic Signal Technician အယောဘကိုဖျေါပွခကျြနမူနာ
ဧပြီလ 13, 2016 ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု|Engineer|Field Work 1
Traffic Signal Technician Job Description The Traffic Signal Technician performs at the Apprentice or Journey level, အရည်အချင်းများနှင့်ရွေးချယ်ထားကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏အတှေ့အကွုံအဆင့်ပေါ် မူတည်.. ယေဘုယျညွှန်ကြားမှုအောက်တွင်, အဆိုပါခရီးအဆင့်အနေအထားအသွားအလာ signal ကို tool များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်အတွက်လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်, inspects and troubleshoots traffic …
ဧပြီလ 8, 2016 ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု|Engineer|Field Work 1
JOB DESCRIPTION PHOTOGRAPHER PHOTOGRAPHER should be imaginative, ပုံအဘို့အကောင်းတစ်ဦးမျက်စိနှင့်အတူ. ထူးချွန်နည်းပညာနှင့်ဓာတ်ပုံပြပွဲကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်. ကောင်းသောဆက်သွယ်ရေးနှင့်လူများကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်. ကောင်းသောအိုင်တီကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်, အဓိကအားဖြင့်ယင်းသို့ Photoshop ကိုအဖြစ်ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များနှင့်အတူ. စီးပွားဖြစ်ထောက်ထားစာနာခြင်းနှင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုစျေးကွက်မှာကောင်းသောဖြစ်. SPECIALIZATION GENERAL PRACTICE – the …